musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » India Kupwanya Nhau » Chiutsi chine chepfu chinoputira Delhi mushure memutambo wechiHindu
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • tsika nemagariro • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • India Kupwanya Nhau • nhau • vanhu • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Chiutsi chine chepfu chinoputira Delhi mushure memutambo wechiHindu.
Delhi ine mhepo yakaipisisa yemhando dzese dzepasirese, asi kuverenga kweChishanu kwainyanya kushata nekuti vagari vemuguta vakapemberera Diwali, mutambo wechiHindu wemwenje, neChina manheru.
NeChishanu mangwanani, India's Air Quality Index yakawedzera, ichisvika zvinoshamisa mazana mana nemakumi mashanu pachiyero che459.
Kusvibiswa muDelhi neChishanu kwaive kwakakwira kanokwana kagumi pane kusvibiswa muLondon.
Kuwanda kwehupfu hwehupfu PM2.5, iyo inogona kukonzera chirwere chemoyo uye chekufema, zvakare yakarova zvakanyanya njodzi.
India's Air Quality Index yakawedzera, ikasvika 459 pachiyero che500 nhasi, zvichiratidza kusvibiswa kwemhepo 'kwakanyanya' - nhamba yepamusoro yakanyorwa gore rino.
Zvinoenderana nezviwanikwa zvepamhepo, kusvibiswa mukati Delhi yaive yakapetwa ka10 kupfuura muLondon nhasi.
Vagari veguta guru reIndia vakamuka neChishanu mangwanani kuti vaone guta ravo rakafukidzwa nemhute ine muchetura, mushure mekunge vapfaviri varamba kurambidzwa kwekushandisa mafirework apo mamirioni aipemberera mutambo wechiHindu wemwenje manheru nezuro.
Kuwanda kwehupfu hwehupfu PM2.5, iyo inogona kukonzera chirwere chemoyo uye chekufema, zvakare yakarova zvakanyanya njodzi. Sangano reWorld Health Organisation rinoona mazinga epagore ePM2.5 ari pamusoro pemakrogram mashanu asina kuchengetedzeka, asi neChishanu, guta rakasimba rine mamirioni makumi maviri rakaona avhareji yekuverenga muguta rose ichisvika mazana manomwe neshanu mamicrogram. Iyo Indian Express yakashuma kuti PM20 mazinga akayera whopping 706 micrograms na 2.5am neChishanu.
Mifananidzo ye Delhi yakagovaniswa pamhepo ratidza smog chena yakaomeswa yakazorora pamusoro peguta guru, nekuonekwa kwakadzikira zvakanyanya.
Delhi ine mhepo yakaipisisa yemaguta makuru enyika yose, asi kuverenga kweChishanu kwainyanya kuipa nokuti vagari vomuguta vakanga vapemberera Diwali, mutambo wechiHindu wemwenje, neChina manheru. Vazhinji vakanga varamba kurambidzwa kwezvipfure, vachiwedzera hutsi hune muchetura kumhepo hwatove nechepfu nezvinhu zvisingaperi.
Kunyange zvazvo tsika iyi ichidzivirirwa zvakanyanya, moto wemashanga - maitiro ekuisa moto nemaune zvirimwa zvasara kuti zvigadzirire kutenderera kunotevera - zvinokonzeresa kuwanda kwekusvibiswa kwemhepo panguva ino yegore. Nguva yeDiwali inopindirana neyemoto, sezvo mutambo unoitwa pakupera kwekukohwa kwezhizha.
Maererano ne SAFAR, chirongwa chekutarisa kwemhando yemhepo pasi pemubatanidzwa wemubatanidzwa weBazi rePasi Sainzi, moto wemashanga unopa chikamu che35% cheDelhi's PM2.5 level.
NeChishanu, yakanyevera Delhi vagari vemo kuti vasaite maekisesaizi uye kudzivisa kufamba. Yakati masks eguruva haape dziviriro yakakwana uye akayambira kuti mahwindo ese anofanirwa kuvharwa uye dzimba hadzifanirwe kubviswa vacuum, asi nyoro-mopped panzvimbo.